दैनिकी राशिफल : वि.सं. २०७६ असार १७ गते मंगलबार - Sutra TV Sutra TV
दैनिकी राशिफल : वि.सं. २०७६ असार १७ गते मंगलबार
मेष : मित्रहरूले तपाईंलाई कोही विशेष व्यक्तिसँग परिचय गराउनेछन् जसले तपाईंको विचारमा केही उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ। वित्तमा निश्चित बढोत्तरी हुनेछ – तर त्यही समयमा व्ययमा पनि वृद्धि हुनेछ। बच्चाहरुले अध्ययन र योजनामा ध्यान केन्द्रित गरेर भविष्यको लागि सोच्नु आवश्यक छ। तपाईंको प्रेम नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। आजको दिन आफ्नो प्रेमको मुस्कानबाट सुरु हुनेछ, र एक-अर्काको सपनामा अन्त हुनेछ। मार्केटिङ क्षेत्रमा सामेल हुने लामो अभिलाषा फलीभूत हुन सक्छ। यसले तपाईंलाई अत्यन्तै आनन्द दिनेछ र तपाईंले काम पाउनको लागि सामना गरेका सबै बाधाहरु हट्नेछन्। नयाँ विचारहरूलाई जाँच्ने सही समय। असहमतिको श्रृङ्खला धेरै बढ्नेछ र तपाईंको जोडीसित झगडा मिलाउन धेरै गाह्रो हुनेछ।
वृष : “आज तपाईंसँग आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधारका कामहरू गर्न प्रशस्त समय हुनेछ।” अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंको जीवनमा एउटा विशेष ठाउँ ओगट्नेछन्। तपाईंको प्रेमी जीवनले तपाईंको लागि आज साँच्चै नै अद्भुत केही ल्याउनेछ। तपाईंका प्रयासहरूका लागि मान्छेले काममा तपाईंलाई पहिचान गर्नेछन्। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। तपाईं आज थाहा पाउनुहुनेछ कि विवाह भगवानले नै जुराएको हो।
मिथुन : आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस्। योग्यहरूका लागि वैवाहिक साँठगाँठ हुनेछ। तपाईंले आज प्रेम गर्ने मौका गुमाउनु भएन भने, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा कहिल्यै तपाईंले यो दिन बिर्सन सक्नु हुनेछैन। नयाँ विचारहरू फलदायी हुनेछन्। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। आज बिहान तपाईंलाई केही प्राप्त हुन सक्छ जसले गर्दा तपाईंको आफ्नो सम्पूर्ण दिन रमाइलो हुनेछ।
कर्कट : भाग्यमा निर्भर नहुनुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्यको सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि भाग्य तपाईंसँग कहिल्यै नआउने अल्छी देवी हो। यो आफ्नो स्वास्थ्य प्राप्त गर्नको लागि तपाईंले आफ्नो वजन नियन्त्रण गर्ने र पुनः व्यायाम सुरु गर्ने सही समय हो। विगतका लगानीबाट आयमा वृद्धि हुने देखिन्छ। तपाईंको सहयोगको आवश्यकता पर्ने साथीहरूलाई भेट्नुहोस्। प्रेममा निराशा हुन सक्छ तर मन नमार्नुहोस् किनभने प्रेमीहरू जहिल्यै चापलूस हुन्छ्न। कठिन चरण पछि, आज तपाईंको काममा केहि राम्रो कुरा हुनाले आश्चर्य हुनेछ। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। तपाईं आफ्नो जीवनसाथीको बकबकले झर्किन सक्नु हुनेछ – तर उनले तपाईंको लागि साँच्चै नै महान कार्य गर्नेछन्।
सिंह : बाहिरी खेलहरूले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछन् – ध्यान र योग लाभदायक हुनेछन्। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। एउटा पुरानो सम्पर्कले तपाईंलाई केही समस्यामा पार्न सक्छ। तपाईं मायालु मुडमा हुनुहुनेछ – त्यसैले आफ्नो र आफ्नो प्रियको लागि विशेष योजना बनाउने निर्णय गर्नुहोस्। तपाईंलाई आज काममा आफ्नो केही राम्रा कार्यहरूका लागि सम्मान गरिनेछ। टाढाको यात्रा आरामदायक हुनेछैन – तर महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईंको जोडीले थाहै नपाई साँच्चै शानदार केही कुरा गर्नेछन् जुन अविस्मरणीय हुनेछ।
कन्या : शारीरिक वास्तविकता हेर्ने इच्छा भएमा तपाईंले आफ्नो विचार र ऊर्जा बाँट्नुहोस्। मात्र अन्दाजले कुनै कुरो हुँदैन। तपाईंसँग अहिलोसम्म भएको समस्या के हो भने तपाईंले प्रयास नगरेर मात्र इच्छा गर्नुहुन्छ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन। लघु अवधिका कार्यक्रममा आफुलाई संलग्न गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई नवीनतम प्रविधिहरू र कौशल सिक्न मद्दत गर्नेछ। आज तपाईंले गरेको स्वयंसेवक कार्यले तपाईंले सहयोग गर्नहरूलाई मात्र नभएर तर तपाईंले थप आफैलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न पनि मद्दत गर्नेछ। कामको दबाबले लामो समयदेखि तपाईंको वैवाहिक जीवनमा व्यवधान दिंदै थियो। तर, आज सबै शिकायतहरू समाप्त हुनेछन्।
तुला : आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ। तपाईंको अव्यावहारिक योजनाले धनको कमी गराउनेछ। तपाईंको ज्ञान र राम्रो हास्यले तपाईंका वरिपरिका मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्। रोमान्सका लागि राम्रो दिन। योग्य कर्मचारीहरुका लागि पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ। आज तनाउले भरिएको दिन हुनेछ, नजिकका कर्मचारीहरूसँग धेरै मतभेद आई पर्न सक्छ। आज तपाईंले वैवाहिक जीवनको परमानन्द स्वीकार गर्ने प्रशस्त अवसर पाउनु हुनेछ।
वृश्चिक : आफ्नो दीर्घ रोग निको पार्न मुस्कान चिकित्साको प्रयोग गर्नुहोस् किनकि यो सबै समस्याको लागि उत्तम विषनाशक औषघि हो। विशेष गरेर प्रमुख वित्तीय सम्झौतामा बातचीत गर्दा, हतारमा निर्णय नलिनुहोस्। तपाईंको आकर्षण र व्यक्तित्वले केही नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। कसैको हस्तक्षेपले तपाईंको प्रियतमासँगको सम्बन्ध तनाउपूर्ण हुन। काममा मान्छेसँग काम गर्दा बुद्धि, धैर्य र सावधानी अपनाउनुहोस्। आफ्नो तागत र आफ्नो भविष्यको योजना पुन: आकलन गर्ने समय। आफ्नो जोडीका आफन्तहरूले तपाईंको वैवाहिक परम आनन्दमा बाधा पुर्याउन सक्छन्।
धनु : तपाईंले आफ्नो भावना नियन्त्रण गर्नुहोस् र सकेसम्म छिट्टै डरबाट छुटकारा हुनुहोस्, किनकि कार्डमा स्वास्थ्यमा तत्काल प्रभाव पर्ने र राम्रोसँग स्वास्थ्यको आनन्द लिने तपाईंको बाटोमा रहेको अवरोध बढ्ने सम्भावना छ। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस् – तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। साँझमा चलचित्र-थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र राम्रो मुडमा राख्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो प्रियलाई उनको पछिल्लो भावशून्यताका लागि क्षमा गरेर आफ्नो जीवन लायक बनाउनु हुनेछ। तपाईंको कामको पर्यावरण आज राम्रो कार्यमा परिवर्तन हुन सक्छ। यात्रा र शैक्षिक गतिविधिहरूले तपाईंको जागरूकतामा बृद्धि गर्नेछ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज अचम्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ।
मकर : तपाईंहरू कतिजना देरीसम्म ओवरटाइम काम गरिरहनुभएको छ र आफ्नो शक्ति पनि कम हुँदै गइरहेको छ – आज तपाईंले चाहेको अन्तिम कुरा तनाउ र दुविधाको एक दिन हो। तपाईंले कमीशन – लाभांश – वा रोयल्टीहरूबाट लाभ प्राप्त गर्नु हुनेछ। पोस्टद्वारा आएको पत्रले सम्पूर्ण परिवारमा खुसीको समाचार ल्याउँछ। तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई भेटेपछि रोमान्सले तपाईंको मन ढाक्नेछ। तपाईंले सही मानिसहरूलाई आफ्नो कौशल र प्रतिभा देखाउनु भयो भने चाँडै नै नयाँ र राम्रो सार्वजनिक छवि बनाउनु हुनेछ। आज तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।
कुम्भ : बसेको बेला चोटपटकबाट जोगिन धेरै होशियार हुनुहोस्। त्यसमा पनि राम्रो मुद्राले व्यक्तित्व बढाउँछ र साथै स्वास्थ्य र विश्वासको सुधार गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। दिनको पछिल्लो भागको अनपेक्षित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारको लागि आनन्द र खुशी ल्याउँछ। प्रेमी जीवन आज सुन्दर रूपमा साँच्चै फूल्नेछ। मार्केटिङ क्षेत्रमा सामेल हुने लामो अभिलाषा फलीभूत हुन सक्छ। यसले तपाईंलाई अत्यन्तै आनन्द दिनेछ र तपाईंले काम पाउनको लागि सामना गरेका सबै बाधाहरु हट्नेछन्। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। आज बिहान तपाईंलाई केही प्राप्त हुन सक्छ जसले गर्दा तपाईंको आफ्नो सम्पूर्ण दिन रमाइलो हुनेछ।
मीन : व्यस्त समय भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। महत्वपूर्ण मान्छेहरू विशेष वर्गका मान्छेलाई केहि धन प्रदान गर्न तयार हुनेछन्। पुर्खाका सम्पत्तिको उत्तराधिकारको समाचारले सम्पूर्ण परिवारलाई खुसी बनाउँछ। मित्रता गहिरो हुँदै गएपछि रोमान्स आफैं त्यहाँ आउँछ। तपाईंले सीधा जवाफ दिनुभएन भने तपाईंका साथीहरू नाराज हुने सम्भावना छ। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने – त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। तपाईं आफ्नो कामुक वैवाहिक जीवनमा एउटा सुन्दर परिवर्तन अनुभव गर्न जानु हुँदैछ।
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक ३ गते आइतबार, ई.सं. २०१९ अक्टूबर २०
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक १ गते शुक्रबार, ई.सं. २०१९ अक्टूबर १८